Nduzi maka owuwe ihe ubi nduku - Potatoes News
Otu onye ama ama n'ubi akwụkwọ nri, poteto bụ otu n'ime ihe ubi kachasị mfe iji too. Nlekọta dị ala, ihe ọkụkụ na -akụ ihe ọkụkụ na -enyere aka ibelata uto ahịhịa ma zụlite ala gị. Ha na -enwekwa obi ụtọ na -eto n'ime arịa na akwa ma ọ bụ ndị na -akụ ihe dịka ha nọ n'ime ala.
Ntuziaka maka owuwe ihe ubi nduku 6
Ma olee mgbe tubers nduku gị dị njikere iwe ihe ubi? Ma, ikekwe karịa, kedu ka ị ga -esi egbute ha? Ntụziaka anyị n'ịkwado poteto ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma.
Kedu mgbe m ga -egbute poteto m?
Mgbe ihe ubi gị dị njikere maka owuwe ihe ubi na -adabere n'ọtụtụ ihe, gụnyere ọnọdụ mpaghara gị na ihu igwe. Ọ daberekwa n'ụdị ụdị nduku ị kụrụ. A na -ekewa osisi nduku mkpụrụ n'ime ụzọ atọ:
Oge nke abụọ,
Mkpụrụ osisi nduku mbụ
Dị ka aha ahụ na -egosi, mkpụrụ osisi nduku mbụ bụ otu n'ime mkpụrụ izizi ị nwere ike kụọ, yabụ, bido iwe ihe ubi. Ndị na -akọ ubi n'ọtụtụ mpaghara nwere ike kụọ mkpụrụ mbụ site na ngwụsị February ruo etiti Machị. Tubers dị njikere maka owuwe ihe ubi n'izu 10 ruo 12 ka e mesịrị. Ọ bụrụ na ihu igwe dị mma, ịnwere ike iwe ihe ubi obere oge.
Ntị ntị mbụ bụ otu n'ime ụdị nduku kachasị dị mfe na -eto n'ihi na ọ na -esiri ike ịrịa ọrịa. Ndị amara maka ịdị nro ha, na -atọ ụtọ nke ukwuu, ntị ntị mbụ na -adịkarị obere karịa ụdị mkpụrụ osisi, ihe dị ka nha akwa, yana anụ dị nro. Ụdị ndị ama ama gụnyere:
Red Duke nke York,
Onye na -anya ụgbọ elu,
Ọdụ ụgbọ elu Pentland.
Iji mara kpọmkwem mgbe ị ga -amalite iwe ihe ubi ntị mbụ gị, payaa ntị nke ọma na okooko osisi ha. Ụdị nke mbụ na -emepụta ifuru ifuru nke nwere ike ma ọ bụ ghara ito. Mgbe buds malitere ịda, ma ọ bụ ifuru amalite ịcha, ọ bụ oge ịmalite iwe ihe ubi gị. Ụfọdụ akwụkwọ ya nwekwara ike malite na -acha odo odo.
Iji lelee ihe ọkụkụ gị tupu ịmalite owuwe ihe ubi, jiri nwayọ megharịa ụfọdụ ala gburugburu elu osisi ahụ. Ọ bụrụ na ịchọta poteto nke dị ka àkwá, ị nwere ike na -ewe ihe ubi. Ọ bụrụ na ịchọrọ spuds buru ibu, hapụ ha n'ime ala obere oge.
Ntuziaka maka owuwe ihe ubi nduku 7
Ọdịiche Mbụ nke Abụọ
A na -akụ mkpụrụ ntị nke abụọ site na mbido ma ọ bụ n'etiti ọnwa Machị n'ihu, na -abụkarị site n'ụbọchị mbụ nke oge opupu ihe ubi, ihe dị ka izu 2 ruo 3 mgbe ị kụrụ ntị ntị mbụ gị. Ụfọdụ ndị na -akụ ihe na -amasị ịkụ ha n'otu oge dị ka ntị ntị mbụ ha, mana ọ ka mma ichere. Iche izu ole na ole pụtara na ntị ntị nke abụọ gị adịla njikere maka owuwe ihe ubi ihe dị ka izu atọ ka i buliri ntị ntị mbụ gị. Ụdị mmalite nke abụọ nke ewu ewu gụnyere:
Dị ka ntị ntị mbụ, ụzọ kachasị mfe iji mara ma ntị ntị nke abụọ gị adịla njikere maka owuwe ihe ubi bụ ilele okooko osisi. Ozugbo okooko osisi ma ọ bụ buds na -emepebeghị amalite ịda site na osisi, ị nwere ike bido owuwe ihe ubi nduku gị.
A na -akụkarị ya ihe dị ka otu ọnwa ka etinyere ntị nke abụọ gị, ị nwere ike kụọ spuds isi site na etiti Machị gawa maka owuwe ihe ubi mbụ. Maincrops na -eto n'ime ihe dịka izu iri abụọ. Akarị nnukwu tubers karịa ụdị ndị mbụ, ha chọrọ obere oge na -eto eto. A na -ahụkarị tubers maincrop:
Pink maka apụl.
Dịka, ị nwere ike ịmalite iwe ihe ubi poteto na August. Owuwe ihe ubi nwere ike ịdịgide ruo Septemba, dabere na ụbọchị ị kụrụ. Maincrops dị njikere maka owuwe ihe ubi mgbe ọtụtụ akwụkwọ ya na -acha odo odo wee malite aja aja ma ọ bụ daa. Ikwe ka osisi ahụ nwụọ tupu ịmalite owuwe ihe ubi na -enyere tubers aka ịchekwa ọtụtụ starch. Nke a na -enye aka imeju ha ụtọ.
Maka owuwe ihe ubi gị, belata osisi ahụ ihe dị ka sentimita asatọ n'elu ala. Akwụsịla tubers ugbu a. Chere izu ole na ole ọzọ, ha na -echekwa nke ọma n'ime ala, tupu owuwe ihe ubi. Nke a na -enyere aka ịgwọ poteto, na -eme ka akpụkpọ ahụ sie ike ma na -eme ka nchekwa dị mfe. Ọ bụrụ na i bu n'obi na ịchekwa nnukwu mkpụrụ osisi na -ekpo oke ọkụ, ị nwere ike bido iwe ihe ubi ozugbo osisi dị njikere.
Mgbe a ga -ewe ihe ubi tubers n'oge
Ọ bụrụ na ị kụrụ osisi mbubreyo maka owuwe ihe ubi oyi, kwe ka ihu igwe na ihe ọkụkụ ahụ gwa gị oge owuwe ihe ubi. Dị ka ọ dị na mbụ ịkụ mkpụrụ osisi, hapụ elu osisi ka ọ nwụọ tupu ịmalite owuwe ihe ubi.
Ntuziaka maka owuwe ihe ubi nduku 8
Ọnọdụ okpomọkụ nwekwara ike imetụta oge owuwe ihe ubi. Osisi nduku nwere ike ịnagide ntu oyi mana ekwesịrị ibuli ya ma chekwaa ya tupu ntu oyi siri ike abịarute. Ala kwesịrị ịdịkarịa ala 40 ℉ ma nwee ike ịrụ ọrụ. Mgbe ọ gwọchara ihe ọkụkụ ahụ, enwere ike ịchekwa ya maka oge oyi na mmalite oge opupu ihe ubi. Ịzụlite ihe ọkụkụ buru ibu, nke oge nwere ike ịchekwa bụ nnukwu ụzọ na -eto nri nke gị n'afọ niile.
Otu esi ewe ihe ubi nduku gị
Kpachara anya mgbe ị na -ewe ihe ubi. Gbalịa izere imebi tubers. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ị bu n'obi ịchekwa spuds gị. Tubers mebiri emebi anaghị echekwa nke ọma, kama nke ahụ, nwere ike ime ka ihe ọkụkụ gị niile ree ure.
A na -eme owuwe ihe ubi tubers kacha mma n'ụbọchị akọrọ. Oke oke mmiri n'oge owuwe ihe ubi nwere ike ịkwalite ire ure na ọrịa. Ma ị bụ na -eto eto nduku na containers ma ọ bụ n'ime ala, owuwe ihe ubi bụ otu ihe.
Otu esi ewe ihe ubi nke mbụ na nke abụọ
Ọ na -adịrị m mfe iji aka m wepu ihe ubi nduku n'oge. Ugbo osisi nyere aka mee ka aka gị dị ọcha ma chekwaa.
Jiri aka gị banye n'ime ala wee gwuo ọtụtụ spuds dị ka ị nwere ike ịhụ. Ọ bụrụ na ị gwakọbara ala gburugburu osisi ahụ n'oge usoro na -eto eto, jiri nlezianya wepuo ala were poteto nke ị chọrọ tupu iweghachite ala gburugburu osisi. Mgbe ị na -ewe ihe ubi were naanị ihe ịchọrọ, ụdị nke mbụ anaghị echekwa nke ọma. Ha na -anọkwa nke ọma n'ime ala. N'ezie ọtụtụ na -aga n'ihu na -eto ma na -etolite.
Mgbe owuwe ihe ubi tinye a azụ emulsion fatịlaịza ka osisi. Nke a na -agba ume ụdị tubers ọhụrụ na uto ọhụrụ ka etolite.
Ntuziaka maka owuwe ihe ubi nduku 9
Ọ bụrụ na ị na -eto poteto gị n'ime akpa dịka Akpa Delxo 7 Gallon Na -eto nke nwere windo owuwe ihe ubi, naanị bulie flaapu ahụ ma wepụ ụwa ruo mgbe ịchọta poteto gị. Mgbe ị tụchara ihe ị chọrọ, enwere ike dochie ụwa na poteto ndị fọdụrụ nwere ike ịga n'ihu na -eto ruo mgbe ị dị njikere iji ha.
Mgbe ị na -ewe ihe ubi ma na -elekọta osisi nduku, ị nwere ike ịhụ obere mkpụrụ nduku n'etiti akwụkwọ. Ha na -eyikarị tomato, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndị a na -egbu egbu ma ekwesịrị ibibi ma ọ bụ dọba ya n'elu ikpo compost.
Otu esi ewe ihe ubi Maincrop gị
Maka nnukwu osisi, ọ ga -adị mkpa na ị ga -eji ndụdụ ogige iji bulie osisi ahụ dum. Fanye ndụdụ n'ime ala ihe dịka otu ụkwụ site na etiti osisi ahụ. Tinye n'ime ala ka o kwere mee. Ị na -achọ ebuli oke mgbọrọgwụ niile dịka otu. Ị nwere ike ịtinye ndụdụ ahụ ugboro ole na ole tupu ịme nke a. Cheta ka ị lelee ala mgbe ebuliri osisi ahụ maka poteto ọ bụla ị nwere ike hapụ.
Mgbe owuwe ihe ubi gbachapụrụ unyi ọ bụla wee hapụ spuds ka ọ kpoo ruo awa ole na ole tupu iji ma ọ bụ chekwaa.
Enwere ike iwepụta mkpụrụ osisi Maincrop na -eto n'ime arịa naanị site n'ịwepụta ihe dị n'ime akpa ahụ n'elu mpempe akwụkwọ. Ị nwekwara ike ịtọpụ ala n'ime wheelbarrow. Gwuo n'ime ala iji kpokọta spuds gị niile.
Ọ bụrụ na ị na -ewe ihe ubi ma ọ bụ mkpụrụ nduku maka nchekwa oyi, gwuo ole na ole iji nwalee ha tupu owuwe ihe ubi niile. Akpụkpọ ahụ kwesịrị ịdị oke ma kwụsie ike n'anụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ike ịchacha akpụkpọ ahụ ngwa ngwa, tubers dị oke ọhụrụ, ekwesịrị ịhapụ ha n'ime ala ụbọchị ole na ole ọzọ.
Mgbe ị na -ewe ihe ubi, kpachara anya ka ị ghara imebi ma ọ bụ belata ihe ọkụkụ. Mebiri tubers ire ere n'oge nchekwa.
Mgbe owuwe ihe ubi gwọchara tubers site n'ikwe ka ha nọdụ n'ebe kpọrọ nkụ maka ihe dịka izu abụọ. N'otu oge ahụ, okpomọkụ dị n'akụkụ ihe ọkụkụ kwesịrị ịdị ogo 2 ruo 45 ℉. Ka poteto na -agwọ akpụkpọ ahụ ha ka ọ na -esi ike, obere ọnyá na -emechikwa ya. Mgbe ị gwọchara, ị nwere ike chekwaa tubers gị. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi echekwa poteto gị mgbe owuwe ihe ubi, nke a bụ nnukwu ntuziaka miri emi.
Mgbe ị na -ewe ihe ubi nduku ma ọ bụ wepu ya na nchekwa, lelee agba akpụkpọ ahụ ha mgbe niile. Zere tubers ọ bụla na -acha akwụkwọ ndụ. Ndị a nwere ọkwa alkaloids na -abawanye, nke na -ebutekarị oke ọkụ. Green spuds nwekwara ike ịnwe solanine. Nke a abụghị naanị na -eme ka ha nwee obi ilu mana bụkwa nsi. Iji zere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dobe poteto gị n'ọchịchịrị dịka o kwere mee.
Ọ bụ ezie na nduku na -eto eto nwere ike weghara nnukwu ohere, ọ nwekwara ike chọọ ịrụ ọrụ nke ọma usoro ntụgharị ihe ọkụkụ, n'ezie, ọ bara uru itinye mgbalị. Nduku nduku ọhụrụ ewepụtara na -adị nro ma nwee ụtọ karịa karịa ụlọ ahịa zụrụ. Ha bụkwa otu n'ime ihe ọkụkụ kacha dịrị mfe ịkọ na iwe ihe ubi.
Tags: Guideowuwe ihe ubi
Uzbekistan setịpụrụ ndekọ ọzọ nke mbubata nduku
DEULA-Nienburg na-agụzi Potato News
GEA IWU Ngwa PORTFOLIO NA CHILLVENTA